सूचना प्रविधि – tvNEPALI
पथरीशनिश्चरे, लिम्बू जातिको संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङ पथरीशनिश्चरे मोरङको नगरमा श्रीजंगा किरात लिपी लिम्बू भाषामा समेत पठन पाठनको माग गरेको छ । किरात याक्थुङ चुम्लुङ नगर समितिले आज नगरप्रमुख दिलीपकुमार राई समक्ष नगरमा आवश्यक ठाउँका सामुदायिक विद्यालयमा लिम्बूभाषामा पठन पाठनको...
फेसबुकले नयाँ ‘डेटिङ एप’ ल्याउने घोषणा गरेको छ । फेसबुक कम्पनीका सिईओ मार्क जुकरबर्गले नयाँ डेटिङ एप ल्याउने घोषणा गरेका हुन् । क्यालिफोर्नियामा मंगलबार भएको एक कन्फ्रेन्समा जुकरबर्गले नयाँ फिचरका साथ उक्त एप ल्याउने कुराको जानकारी दिएका हुन् । उक्त...
एजेन्सी। ८ हजार किलो तौलको एक अनतरिक्ष स्टेशन अन्तरिक्षमा बिग्रिएपछि अनियन्त्रित रुपमा पृथ्वीतर्फ खसिरहेको छ । यो स्टेशन यसै साता पृथ्वीमा ठोक्किने अनुमान गरिएको छ । यो अन्तरिक्ष स्टेशन चीनको हो । स्टेशन २०१६ मा बिग्रिएर अनियन्त्रित भएको थियो ।...
आइफोन ७ का मोडलहरुमा समस्या भए एप्पलले सित्तैमा बनाइदिने भएको छ । तपाई भन्नुहोला यो के नयाँ खबर भयो र ? यसै पनि आइफोन लगायतका एप्पलका उत्पादनहरुमा भएका गडबडीहरु एप्पलको आधिकारिक मर्मत स्थानहरुबाट सित्तैमा बनाउँन सकिन्छ । हो तर त्यस्तो...
अहिले फेसबुक जसले पनि चलाउने गर्दछन र प्राय धेरैलाई यस सम्बन्धि रोचक कुराहरु थाहा नहुन सक्छ । फेसबुकको सम्बन्धि धेरै जिज्ञासाहरुको जवाफ जान्ने चाहना सबै फेसबुक प्रयोगकर्ताको हुन्छ । फेसबुकबारेका यस्तै सातवटा रोचक तथ्य यस्ता छन्ः १.फेसबुकको रङ किलो निलो हुन्छ...
यो लेख हामीले www.nepalitechblog.com बाट साभार गरेका हौँ । नेपालीमा प्रबिधिसँग सम्बन्धित जानकारी र समाचारहरु हेर्न www.nepalitechblog.com भिजिट गर्नुहोस् । मोबाइलमा फेसबुक चलाउँदै युट्युबमा भएका गीतहरु पनि सुन्न पाए कति रमाइलो हुने थियो ? अथवा, युट्युबका भिडियो हेर्न मोबाइलमा युट्युब...
मोबाइलबाटै मुसा भगाउने तरिका...
मानिसहरुलाई मुसाले धेरै दिक्क लगाएको हुन्छ र उनीहरु त्यस बाट छुटकारा पाउन अनेक थरि उपाय अपनाउने गर्दछन र पनि केहि गर्न सक्दैनन् । अहिले सम्म तपाईले आफ्नो तरिकाले मुसालाई भगाउनु भो होला । अब फोनको सहायता ले ढुक्कले मुसा भगाउनुस ।...
होसियार ! अध्यारोमा लामो...
आजकल मानिसहरु राति सम्म मोबाइल चलाउने गर्दछन तर उनीहरुलाई थाहा नहुन सक्छ यसरि अबेर राति सम्म मोबाइल चलाउदा आखाको ज्योति पनि गुम्न सक्दछ । यदि तपाई पनि राती अँध्यारोमा लामो समयसम्म एक टकले स्मार्टफोन चलाउने गर्नुहुन्छ भने होसियार । किनकी यस्तो...
बालबालिकाले इन्टरनेट चलाउदा हुन...
आजकल बालबालिकाहरु धेरैनै इन्टरनेट चलाउन थालेका छन जसले गर्दा उनीहरुको पढाइ खराब हुने गर्दछ । बालबालिका मामिलासम्बन्धी एकजना ब्रिटिश आयुक्तले अभिभावकहरुले आफ्ना सन्तानलाई सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा बढी समय बिताउनबाट रोक्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन् । अब्जर्भर पत्रिकालाई दिएको अन्तरवार्तामा एन लङफिल्डले बालबालिकाको...
फेसबुकको नयाँ अपडेट –...
आजकल मानिसहरु फेसबुक बिना बाच्न सक्दैनन् नै होला सायद किंनकी मानिसहरुले यसलाई आफ्नो दैनिक जीवनको एउटा अंगनै बनाईसकेका छन । फेसबुकले बिहिबार एक वृहत अपडेटको घोषणा गरेको छ जसले प्रयोगकर्ताको न्युज फिडमा फेसबुक पेज र सेलेब्रिटीभन्दा माथी साथी र आफन्तको अपडेटहरु...
अब ९९९ रुपैयाँमै नयाँ...
डिटिसीको सबैभन्दा सस्तो मोबाइल नेपाली बजारमा भित्रिएको छ। डिटिसी ब्राण्डको नयाँ फोन एचटिसी एम वन कल मोबिलिटी प्राइभेट लिमिटेडले नेपाल भित्र्याएको हो। यसको मूल्य ९ सय ९९ रुपैयाँ तोकिएको छ। नेपाली बजारमा पाइने यो सबैभन्दा सस्तो मोबाइल हो। यसमा एक...
‘न्यूज फिड’मा परिवर्तन गर्दै...
लोकप्रिय सामाजिक सन्जाल फेसबुकले समाचार, व्यापार, ब्रान्ड र मिडियासम्बन्धि फिडमा मुख्य परिवर्तन गर्दै प्रयोगकर्तामैत्रि बनाउने भएको छ । फेसबुकका कार्यकारी प्रमुख मार्क जुकरबर्गले फेसबुकको वालमा आउने समाचार, व्यापार, ब्रान्ड र मिडियासम्बन्धि फिडलाई नियन्त्रण गरी प्रयोगकर्ताका परिवारिक सदस्य, आफन्त र शाथीभाईको...